Iminyaka engu-20, umphakathi wamazwe omhlaba ukhathazeke kakhulu ngesimo esasikhona imvelo. Ngakho-ke, kungokwemvelo kohlaka umthetho wamazwe ngamazwe kwakhiwa igatsha "umthetho wamazwe ngamazwe kwemvelo". izinhlangano ezilawulwa ziye zasungula uhlu imithetho ukuthi kunqunywe kuqale ukuthuthukiswa, ukuvikelwa imvelo nezikhungo kwabantu Imiphumela umsebenzi. Ngakho kufanele babheke ngokucophelela ku kulesi sigaba kwamaZwe.
Incazelo kanye nezimiso yomthetho wezizwe kwemvelo
Lomkhakha kumelwe zibhekwe njengezindawo okungamelwe inhlangano imithetho kanye nezimiso, ukuhambisana iqinisekisa ekulondolozweni imvelo, ngaphezu nokuqalisa izindlela ukuthuthukisa isimo izikhonzi zawo ezingokomthetho ngempumelelo.
Kungani ngamazwe umthetho kwemvelo livela acute ngakho futhi kubalulekile? Impendulo ingase ingabi e yokuthi, njengoba zamashumi amahlanu ekhulwini elidlule leminyaka, ukukhula ngokushesha umkhakha sekubangele global ukungcoliswa kwemvelo. Ngaphezu kwalokho, inani nanini nyuka ka corporations sezizwe ezihlukahlukene kwaholela ukukhiqizwa ezivamile yokusondela namazinga uhlelo kwemvelo. Kule ndaba, izimiso ezithile umthetho wamazwe ngamazwe kwemvelo zenzelwe. Ziyakwazi:
1. Isimiso global - angavulwa kanje: - uma kwenzeka ezemvelo esinqumweni sakhe kungumsebenzi wonke umphakathi wamazwe omhlaba. Futhi lesi simiso kabanzi. Engingakusho nje kokukhumbula sivumelwano ngesikhathi kukhishwa ukungcola emkhathini noma ekulweni imiphumela ukugcwaliswa uwoyela kwelinye amanzi. Ngaphezu kwalokho, lesi simiso lihlobene eduze ukongiwa zezinto eziphilayo;
2. Isimiso amagugu jikelele kwemithombo yemvelo ngaphandle sendawo yezwe. Lubonakaliswa iqiniso lokuthi akukho-State unelungelo ezothatha amaminerali, uma bengekho insimu yalo;
3. izimiso inkululeko cwaningo kanye nokuxhashazwa kwemithombo yemvelo lapha angabelwa futhi isimiso esingenakuqhathaniswa sokubambisana kwamazwe omhlaba ezifundweni kwemvelo;
4. Isimiso rationality ekuhlukumezeni kwemithombo yemvelo;
5. Isimiso non-isicelo sisonke umonakalo ngenxa impi ngokukhethekile kanye / noma ukuqedwa yayo;
6. Isimiso zokuphendula ukwephulwa ngemvelo.
Lezi zimiso engxenyeni ethile sonke isibalo sabantu, okuhlanganisa, ngokukhethekile, futhi imigomo ejwayelekile yomthetho wezizwe.
idatha Izenzo adingekayo imithombo sisekelwe eenkambisweni ku lapho ubika isikhungo imisebenzi.
Yemithetho yezizwe ngezizwe kwemvelo
Inkolelo evamile indlela kumafomu yokukhuluma ngaleli lungelo alikho. Abanye abalobi zibahlukanise ngezigaba ezintathu:
1. inkontileka akuyona kuhlobane ngokuqondile amalungelo okukhulunywa;
2. inkontileka equkethe ukulungiselwa okuthile;
3. inkontileka ngokucacile okuhloswe ngazo umthetho international kwemvelo.
Okunye ukwaba imithetho yesiko kanye nezinhlinzeko zezivumelwano ngamazwe. Siphinde ukwazi ukuthi zazivelaphi eziyisisekelo umthetho wamazwe ngamazwe kwemvelo. Ukuhlukanisa phakathi kwezinhlobo ezimbili: kokumenyezelwa neyesigodi. Lo mqeqeshi owake wapheka kuzomele sifake Simemetelo 1972 ku-Human Imvelo, elakhiwa zonke nokubambisana olwengeziwe. Ukuze yesibili - neSivumelwano emingceleni yamazwe ikakhulu esifundeni ukungcoliswa komoya olude, ithuthukiswe 1979, i-Convention for the Ukuvikelwa Layer-ozone, ewuhlobo evunyiwe Vienna (Austria) ngo-1985, kanye nezinye izingxenye zokulawula bemvelo.
Ngakho, namuhla, umthetho wamazwe omhlaba kwemvelo - kuba isikhungo esibalulekile, okuhloswe ngaso ekulondolozeni ukulinganisela global bemvelo bese ugcine imvelo emhlabeni ukuze kuzuze izizukulwane ezizayo.